Muhiimada ay leedahay maareynta waqtiga – Barocaafimaad |
Waxaan ognahay in maalinti ay ka kooban tahay 24 saacadood oo kaliya. Waqtigu waa wax dhamaad leh, adiga ayeyna ku jirtaa hadba sida aad uga faa’ideysan laheyd.
Hadii aad lumisid lacag waxaa laga yaabaa iney kusoo marto fursad aad dib ugu heli kartid lacagti kaa luntay, laakin lama soo celin karo saacad khasaartay. In kastoo aanan saacad kusoo siyaadin karin maalinta, casharkaan wuxuu kaa caawinayaa sida aad faham buuxa uga yeelan laheyd muhiimadda ay leedahay in aad maareyso waqtiga iyo sida maareynta waqtiga ay kaaga caawin karto helidda waqti dheeraad ah oo aad waxyaaba kale ku qabsato. Maareynta waqtiga waxaa ka faa’ideysan kara qof walba.
Muhiimadda maareynta waqtiga
Muhiimada waqtiga iyo maareyntiisa waxey isugu soo shubaneysaa hadba sida uu waqtiga khaas ahaan ama xirfad ahaan u saameeyo noloshaada. Maareynta waqtiga waa habeynta maalintaada aad ku sameysid si aad u sida ugu fiican ugu isticmaashid daqiiqad walbo. Maareyn waqti oo heer sare ah waxey kuu ogolaaneysaa sida aad isugu dheeli tiri laheyd shaqadaada iyo nolosha gurigaaga. Natiijada ka dhalata waqti aan la maareynin waxaa ka mid ah inaad marwalbo dhaafto waqtiga kama dambeynta ah ee loogu talo galay inaad wax ku qabato iyo inaad la noolaato walwal dheeri ah.
Hadii aad horay ugus fashilantay maareynta waqtigaaga weli waxaad haystaa waqti aad wax uga qabato, sameyso waqti kama dambeys ah ee aad ku qabato shaqooyinka, baro sida shaqooyinka qaar dad loogu wakiishado, kala garo shaqooyinka leh mudnaanta koowaad si aad waqtigaaga ugu bixisid waxa kuugu qiimaha badan.
Waa maxay sababta ay kuu anfaceyso inaad maareyso waqtigaaga?
Mar hadii aad taqaanid sida loo maareeyo waqtiga waxaad dareemeysaa faa’idooyin badan oo kaaga imaanaya maareynta waqtiga, waxaana kamid ah faa’idooyinkaas:
Inaad ku qabato hawl badan waqti kooban
Hadii aad leedahay xirafad waqti maareyn ah waxaad awood u yeelaneysaa inaad waqti yar ku sameysid hawlo badan adoon ku bixin juhdi badan. Inaad hawsha kuugu mudnaanta badan waqti siisida waxey fure u tahay qabashada arrimo badan. Hadii aad heshid hal saac oo dheeri ah oo aad ku qaban karto hawl wax soo saar kuu leh waxaad heleysaa 312 saacadood oo wax soo saar leh sanadki.
Shaqo dhameystiran iyo nolol micna wayn kuu leh
Wax ka niyad jab badan malan hadii aad maalinti oo dhan tahay qof mashquulsan hadana aadan aheyn qof wax soo saar leh. Dareenka laga helo hawsha dhameystiran waxey dhiira gelin kuu sii siineysaa shaqada. Marka aad guriga joogtidna waxey kuu fududeyneysaa inaad nasato ood ku raaxeysato waqtigaaga. Hadii aad si hoose ula socotid sida aad waqtigaaga u isticmaashid waxaad heyleysaa waqti aad ku qabato waxyaabaha ay naftaada jeceshahay.
Go’aan qaadasho la’aantaada oo yaraata
Walwalka aad ka walwalshid inaad dooratay doorasho wanaagsan iyo in kale ayaa ah arin waqti badan cunta, waa dabiici in go’aannada waa weyn ay qaataan waqti, laakin go’aannada yar yar aad qaadato maalin walbo ayaa sidoo kale kaa cuni kara waqti badan, garashada waxa aad rabtid inaad sameysid waxey kuu badbaadin kartaa waqti badan. Inti aad maalin walbo waqti badan ku dheygaagi laheyd hawsha kuu taala iyo waxa aad qaban laheyd isku day inaad qorsho joogta ah sameysatid maalin walbo.
Inaad si dhaqsa ah ku gaartid hammigaaga
Dad badan ayaa leh hiigsi iyo hammi wayn, hasa yeeshee faham la’aanta muhiimadda ay leedahay in waqtiga lamaareeyo ayaa ka hortaagan gaaridda hammigooda.
Tusaale, dabcan hammigaaga waxaa kamid ah inaad bilowdid nolol wanaag, laakin waxaadan heli karin waqti aad ku aadid jiimka, waxaa suurta gal ah in waqtiga aad u baahan tahay aad haysid laakin aadan arki karin, waxa kaliya aad u baahantahay waa inaad waqtigaas heshid si aad u gaartid hammigaaga.
Kalsoonidaada oo kor ukacda
Maareynta waqtiga waa arin kor u qaadi karta kalsoonidaada, waxaad awood u heleysaa inaad naftaada siiso daryeel, hadii aad is daryeeshid waxaad dareemeysaa ama u ekaaneysa qof ay nolosha isugu duba dhacsan tahay. Waxaad si joogta u heleysaa wax kiciya kalsoonidaada mar walba oo aad dareentid inaad hawl soo afjartay.
Waqti badan oo kuu soo hara si aad u sameysid waxyaabaha aad jeceshahay
Hadii aad ka fakartid waqtiga ay kugu qaadato inaad seexato, shaqeyso, cunteyso, socota iyo isnadiifiso, waxaa kuusoo haraya 4 saacadood maalin walba oo aad ku qaban kartid waxyaabaha aad jeceshahay. Barashada maareynta waqtigaaga waxey kuu sahleysaa inaad hesho fursado badan oo aad uga shaqeyn karto kobacaaga shaqsi ahaaneed, iyo inaad waqti laqaadato qoyskaaga iyo asxaabtaada.
Hoos udhigidda walwalka iyo in shaqada ay kaa tan badan tahay
Waxaa laga yaabaa in maalinti ay kusugayaan mashruuc, inaad cunugaaga geyso isbitaal ama dugsi, inaad shir la qaadato dad, inaad usoo adeegto gurigaaga. Marka hawlaha ku sugaayo ay si isla eg ay muhiim kugu wada yihiin waxaad dareemeysaa in howsha ay kaa tan badan tahay. Maareynta watiga wuxuu kaa caawinayaa sida aad u eegi laheed hawlaha ku sugaayo oo u kala sooci laheyd iyo inaad mudnaanta siisid hawlaha lagaaga fadhiyo, waxaad durbadiba arki kartaa hawsha la xiriirta shaqada iyo tan la xiriirta naftaada, waxaad sidoo kale garan kartaa sida hawlaha qaar loogu sameeyo wakil.